maha prasad adhikari(maha prasad adhikari) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सेयर लगानीकर्ताद्वारा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग, राष्ट्र बैंक घेर्ने चेतावनी
काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको सेयर धितो कर्जाको सीमाबाट असन्तुष्ट बनेका सेयर लगानीकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले आज दिनभरमा उचित कदम नलिए देशभरका लगानीकर्ता आर्लेर राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। सेयर धितो कर्जाको सीमाले...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल भुक्तानी आफैँमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनेको बताएका छन्। मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजना र राष्ट्र बैंकको प्रवर्द्धनमा सुरु भएको ‘फाइनान्सियल डिजिटलाइजेसन लिटरेसी’ को वेबिनारमार्फत उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेसनको ठूलो...
अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव अनुमानभन्दा कम : गभर्नर अधिकारी
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडको प्रभाव अनुमान भन्दा कम देखिएकाले आर्थिक वृद्धि राम्रो हुने दाबी गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को नयाँ कार्य समितिसँगको भर्चुअल अन्तरक्रियाका क्रममा गभर्नर अधिकारीले केही क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि राम्रो देखिएकोले अबका दिनमा...
राष्ट्रबैंकले 'बिग मर्जर'मा फोर्स नगर्ने गभर्नरको उद्घोष
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ठूला बैंकहरुलाई आपसमा फोर्सफूल मर्जर(बिग मर्जर) गराउने केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि नीति नरहेको प्रष्ट्याएका छन् । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्दै उनले यस्तो भनेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले राष्ट्रबैंकको प्राथमिकता ‘बिग...
राष्ट्रबैंकका गभर्नरको जग्गा र सेयरमा करोडौं लगानी !
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उनका परिवारले जग्गाजमीनमा निकै ठूलो लगानी गरेको देखिएको छ । धनाढ्यहरुका लागि रियलस्टेट लगानीको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । गभर्नर अधिकारीले समेत आफ्नो धेरैजसो लगानी जग्गाजमीनमै गरेका उनले मंगलबार सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरणमा देखिएको हो । साबिकको...
चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने गभर्नरको घोषणा
काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, पुनरकर्जा कोषको आकार क्रमशः बढाउँदै लैजाने, लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउने, कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई...
आम मानिस र साना व्यवसायीका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउने गभर्नरको खुलासा
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीका कारण आउने दिनमा संसारभर ठूलो आर्थिक मन्दी आउने चेतावनी चारैतिरबाट दिइएका छन्। ठूल्ठूला र धनी देशका साथसाथै साना र गरिब देश कोही पनि महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प पारिएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्षतिबाट अछुतो छैनन्। विभिन्न देशका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अर्थतन्त्र उकास्न ब्याज...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । मंगलबार पदबहालीलगत्तै उनले कार्यदल गठनको नीतिगत निर्णय गरेका हुन् । कार्यदलमा रहने सदस्यका बारेमा भने केन्द्रीय बैंकले केही बताएको छैन । पदवाहालीपछि उनले भने,...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन्। बिहान साढे ११ बजे नवनियुक्त अधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । अधिकारीले आजै वालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकमा पदबहालीसमेत गरेका छन्। हिजो सोमबार बसेको...
महाप्रसाद अधिकारी: सन्तुलित भूमिका र खतिवडाको साथले चम्किएका व्यक्ति
काठमाण्डौ । धेरै कमलाई मात्र लागेको थियो नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी आउनेछन् । धेरै मानिसको अनुमान र सत्तासीन नेकपाका नेताहरुकै समेत अड्कलविपरीत ५ वर्ष पुरानो सपनालाई सार्थक बनाउँदै महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा बाजी मारेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल राष्ट्रबैंकका...
काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेला डेपुटी गभर्नरको रुपमा उनी निकट रहेर काम गरेका थिए । हाल लगानी बोर्डको...
काठमाण्डौ । आफ्नै पद रहला/नरहला भन्ने द्विविधाका कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रबैैंक ऐनअनुसार नयाँ गभर्नर छनौटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको कार्यकाल चैत ५ मा सकिँदैछ । नियमअनुसार कार्यकाल सकिनु एकमहिनाअघि गभर्नर विदामा बस्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले नयाँ गभर्नर छनौटको...